Iyanda imbokodo ezishadayo
ISITSHUDENI sase-Uganda uLulu Jemimah siqoke ukuzishada ngenxa yengcindezi yabazali, okuthiwa lona ngumkhuba iSologamy osuqala ukwanda kwabesifazane Isithombe:TWITTER
UYANDA umkhuba wabesifazane wokuzishada, odalwa yizizathu ezahlukene.
Lo mkhuba obizwa ngeSologamy, kuthiwa uyanda emazweni amaningi, okubalwa nawase-Afrika.
Muva nje owesifazane waseGoli oneminyaka engu-62, ushade yedwa emcimbini obunezimenywa ezingu-20.
UNkk Rita Woodall-Terblanche waseVanderbijlpark ongumfelokazi, uzishade ngoNovemba 9. Kuthiwa useke washada kabili phambilini, okubalwa nomshado wokugcina nomyeni wakhe owashona. Umyeni wakhe abeseshade naye iminyaka engu-37, washona ngo-2016.
UNkk Woodall-Terblanche umshado wakhe othathe ihora, kuthiwa ufungiswe ngumngani wakhe. Yize ebengayigqokile ingubo yomshado, konke okunye bekufana nomshado ojwayelekile, waya ngisho eholidini iHoneymoon. Ngonyaka odlule isitshudeni sase-Uganda naso sazishada ngenxa yengcindezi yabazali abebesifunela umaqondana ozosishada.
ULulu Jemimah (33), oyisitshudeni e-Oxford University, washadela endaweni yokucima ukoma edolobheni iKampala.
Udaba lwakhe lwaba sematheni ezinkundleni zokuxhumana. Kuthiwa ubecasulwa ukuthi abazali bakhe kade babezama ukumhlanganisa namadoda abebecabanga ukuthi angamshada.
Okubhalwe ekhasini lakhe iGoFundMe, ayelivulele ukufuna uxhaso lokufunda, kuthiwa wabhala izifundo zomshado eneminyaka engu-16.
Kuthiwa unina ubehlala emthandazela ukuthi athole umaqondana. Lesi sitshudeni ebesenza iMaster’s in Creative Writing, sithe umshado yinto yokugcina ezinhlelweni zayo, yingakho sanquma ukuzishada.
Kuthiwa owesifazane owaqala lo mkhuba nguNksz Linda Baker wase-United States of America (USA), owazishada ngo-1973.
Kuthiwa wayegubha usuku lokuzalwa lokuhlanganisa iminyaka engu-40, wabona ingekho enye indlela yokugubha ngaphandle kokuzishada. Umshado wakhe wawunezimenywa ezingu-75. Enkulumeni yakhe wagcizelela ukuthi abesifazane kumele bazenzele, bangalindi ukwenzelwa.
UMnuz Ndabenhle Myeza ongusomlando ophinde abe ngumluleki wezengqondo, uthe lo mkhuba waqala e-USA futhi uphambene nobu-Afrika. Uthe abanye bebenza izifungo nemimoya ethize, okwenze kuthathwe ngokuthi kuhlobene nenkolo yobuSathane.
Mayelana nokwanda kwalo mkhuba esikhathini samanje, uthe kuhlobene nokudungeka komqondo.
“Isikhathi esiningi abenza lo mkhuba babiza abantu, bajabule nabo kulowo mshado.
“Bajwayele nokuthi bawusabalalise ezinkundleni zokuxhumana ngoba bafuna kwaziwe.
“Isikhathi esiningi laba ngabantu abake bahlukumezeka kakhulu, bangakuthola ukwelashwa. Kuyenzeka futhi kube umuntu onesifo somqondo iBiopolar,” kusho uMyeza.
U-Apostle Bonga Mngomezulu we-Apostolic Church Southern Africa ophinde abe ngumeluleki wemishado, uthe lo mkhuba uphambene necebo likaNkulunkulu.
Uthe ngokweZwi umshado uphakathi kwabantu ababili, yingakho kule mishado yeSologamy engabikhona umfundisi.
Uveze ukuthi imikhuba efana nale yenzeka ngokukopelana nokucabanga kwabantu.